एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू छलफलमा, को को छन् सहभागी? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू छलफलमा, को को छन् सहभागी?
काठमाडौं। लगभग विभाजनको चरणमा रहेको नेकपा (एमाले)को एकता जोगाउन भन्दै दोस्रो तहका नेताहरू फेरि छलफलमा जुटेका छन्।
यसअघि एकताका लागि गठन गरिएको कार्यदलका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। यद्यपि, शुक्रबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदल विघटन गरिसकेको छ।
एमालेले कार्यदल औपचारिक रुपमै विघटन गरेपनि यसअघि त्यसमा रहेका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। उनीहरूबीच एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल चलिहरेको छ।
छलफलमा कार्यदलमा रहेका नेतासँगै पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र योगेश भट्टराई पनि सहभागी छन्।
कार्यदलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल थिए भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त थिए।
आजको छलफलमा सहभागी भएका गुरुङ ओली पक्षका हुन् भने भट्टराई नेपाल पक्षका हुन्।
यसअघि असार २७ गते राति कार्यदलले एमाले एकताका लागि १० बुँदे सहमति तयार पारेको थियो। उक्त प्रस्ताव ओली र नेपाललाई बुझाइएको थियो। जसलाई शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठले ग्रहण गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
कार्यदलले गरेको सहमति अुनसार एमालेलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थाबाट अघि बढाउने, २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग एकता हुँदा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू यथावत रहने भनेको थियो।
त्यस्तै, माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई साविकको नेकपासरहको कमिटीमा राखिने सहमति गरिएको थियो। कार्यदलले गत फागुन २३ यता दुवै तर्फबाट भएका पार्टीको विधान तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही बदर भएको उल्लेख गरेको थियो।
तर, असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि ओली सत्ताच्युत भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट निजीनिवास बालकोट सरेका ओलीले माधवकुमार नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नरहेको बताएका थिए।
उनले आफ्नो सरकार ढाल्ने प्रमुख पात्र नेपाल भएको भन्दै ‘गद्धार’को संज्ञा दिएका थिए। ओलीको अभिव्यक्तिपछि एमालेभित्रको एकता प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।
शुक्रबार नेपाल पक्षका नेताहरू स्थायी कमिटी बैठक रोक्न माग गर्न बैठकस्थल पुगेपनि अध्यक्ष ओलीले बैठक रोक्न मानेका थिएनन्। त्यसपछि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो। यी दुवै बैठकमा नेपाल पक्ष सहभागी भएको थिएन।